काठमाडौँ । सोमबार राति सवा १० बजे नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईका पत्नी हिसिला यमीले फेसबुकमा एउटा भाबुक स्टाटस लेख्दै एक ब्रह्म्चार्य बाबासँगको तस्बिर पोस्ट गरिन् । हिसिलालाई चिन्ने धेरैको ध्यान उक्त तस्बिरमाथि पर्यो ।
स्टाटसमा लेखिएको थियो –म रामपरीक्षण साफीलाई भेट्दा आचार्यचकित भए । जनयुद्धका एक प्लाटुन कमाण्डर अहिले सामान्य ब्रह्माचार्यको रुपमा लहानमा बसिरहेका रहेछन्, उनलाई भेट्दा हामी दुवै भावुक अर्थात् पीडामा थियौ । जब मैले उनलाई सोधें की तपाईले जनयुद्धकालिन र अहिलेको जीबनमा के फरक पाउनुभयो ? तब उनले भने –‘जीवन उतिबेला पनि चुनौतीपूर्ण थियो र अहिले पनि चुनौतीपूर्ण नै छ ।’
हिसिलाको उक्त स्टाटसपछि नेपाली राजनीतिमा रहेका तर इमान्दार हिजोका सहयात्री, नेता, कमाण्डर र सदस्य सबैको मन एकपटक कटक्क खायो । धेरैलाई जनमुक्ति सेनाका एक पूर्ब प्लाटुन कमाण्डर हालका बाबाको तस्बिरले सोच्न बाध्य बनायो ।
नेपालमा जनवादी सत्ता ल्याउने र संसारभर साम्यवादी ब्यबस्था स्थापना गर्ने कल्पना गरेर जनयुद्धमा होमिएका बिज्ञानलाई आत्मसात गर्ने एक जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर जो हिजो धार्मिक रुढीवादको चर्को विरोध गर्थे, त्यही मानिस आज त्यहि रुढीवादी संस्कारको सिकार कसरी भए होला ? त्यससमयका परिवर्तनका संवाहक र आन्दोलनका कमाण्डर अहिले जोगी अर्थात् ‘बाबा’ को भेषमा देखिन्छन् यो कसरी भयो ? यि प्रश्नहरुले माओवादी आन्दोलनमा लागेका हजारौं मान्छेको मस्तिष्कमा भूकम्प पैदा गरिदिएको छ ।
पूर्व कामरेड हिसिलाले अपलोड गरेको तस्बिरमा देखिएको स्वरुपले जो कोहीलाई चकित पर्नेनै भयो ।
त्यहि जनयुद्ध, जसले केहीलाई शान्तिप्रक्रियाका १० बर्षको अबधिमा आधा दर्जन पटक सत्ताको स्वाद दिलायो, केहीले सत्ता बाहिरै रहेर पनि करोडपति हुने अबसर पाए, करोडपति मात्र होइन अरबाैंको सम्पत्ति जोड्ने माध्यम बन्यो । नेताका आसेपासे र भाइभारदारहरू रातारात मालामाल बने । नयाँनयाँ नेता जन्मिए । साम्यवादको त्यो रङ्गिन सपना श्यामश्वेतको विचलनमा पर्यो । जनयुद्धले उठाएका केही मुद्दा पुरा भएका त छन् तर यो केवल सानो अंश मात्र थियो । अहिले जनयुद्धमा होमिएका केही पूर्व लडाकु कमाण्डरहरु परिवार पाल्न कमाउने भनी मरुभूमि भासिएका छन् । शान्ति प्रकृयापछि समूचित व्यवस्थापन नहुँदा हजारौं नेताकार्यकर्ताहरू टुटफूट र विभाजनमा विभक्त छन् । हजारौँ माओवादी जनसेनाहरु स्वदेश तथा विदेशमा विचलित र निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य छन् । माओवादी नेताहरु आफैले बाँडेका सपनाको हत्या आफैले गरेर शहरका आलिशान महलको जिन्दगी जिउन थालेपनि त्यस आन्दोलनका सयौं संख्यामा रहेका जिउँदा सहिदहरू समाजमा अझै छन् । उनीहरुका सर्बोच्च कमाण्डर नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ दुई पटक उपराष्ट्रपति बनिसकेका छन् । माओवादी जनयुद्धका मुख्य नेतृत्व जनमुक्ति सेनाका सुप्रिम कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सक्नेले शहर बसाइ सरेका छन् । अकूत सम्पत्ति पनि कमाएका छन् ।
सत्ता, शक्ति र मोजमस्तिका लागि नलडेका तर न्यायको युद्धमा भने भाग लिएका ‘नयाँ बाबा’ले शान्तिप्रक्रियापछिको राजनीतिलाई बुझ्न सकेनन् सायद त्यसैले यस्तो विचलनको बाटो रोजेका हुन् !
नयाँ बाबा साफी को हुन् ?
रामपरीक्षण साफी सिरहा नगरपालिका –१ लक्ष्मीनियाँका स्थानीय वासिन्दा हुन् । उनलाई माओवादी जनयुद्धको बेला ‘पहाड’ उपनामले बोलाइने गरिन्थ्यो । २०५३ सालमा माओवादी सशस्त्र युद्धमा होमिएका रामपरीक्षण २०५५ सालमा जनमिलिसिया हुँदै जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए । उनि विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार देशैभरी सात डिभिजन र २१ ब्रिगेडमा जनमुक्ति सेना क्यानटोनमेन्टमा क्याम्पिङ भएपछि दोस्रो डिभिजनअन्तर्गत सिन्धुलीको कोकटीमा रहेका सोलुसल्लेरी स्मृति ब्रिगेडको प्लाटुन कमाण्डर थिए । तर, सेना समायोजनको बेला साफीले पाँच लाख लिएर स्वेच्छिक अवकास रोजे ।